တရုတ် switch ကို socket -- sokswitch.com
လူလွတ်ဂိုဏ်း2Screwless Terminal နှင့်အတူ Light Switch
[template id ="3633"] လူပျိုဂိုဏ်း၏အကြီးမားဆုံးအင်္ဂါရပ်2way Light Switch သည်၎င်း၏ကြီးမားသော board ခလုတ်များ၏ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်, ဒါကြောင့်သင်အသုံးပြုတဲ့အခါသက်သာခံစားရလိမ့်မယ်. ၎င်းသည် S80 စီးရီးများတွင်အခြေခံအကျဆုံးခလုတ်များအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥရောပစျေးကွက်တွင်လူသိများသည်. ထုတ်ကုန်မှာလည်းရှိတယ်။
[template id ="3632"] S80 စီးရီးနှင့် ပတ်သက်၍ အကြီးမားဆုံးသောအင်္ဂါရပ်သည်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းနှင့်ကျယ်ပြန့်သောလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောဝါယာကြိုးကိရိယာများဖြစ်သည်. တစ် ဦး ကပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးနှင့်အချောသတ်အမျိုးမျိုးတွင်ပါ ၀ င်သည့်ဆွဲဆောင်မှုနှင့်အင်္ဂါရပ်များကြွယ်ဝသောဝါယာကြိုးကိရိယာ, ထက်ပို။ featuring 150 လက်တွေ့ကျတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များကို. 16A Triple ၏ကုန်ပစ္စည်းလက္ခဏာ။
20နှစ် ဦး ဝင်ရိုးစွန်းအလင်း Switch
[template id ="3631"] 20သုံးတိုင်တိုင် switch သည်, ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးတွင်ပါ ၀ င်သည့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်အင်္ဂါရပ်များကြွယ်ဝသောဝါယာကြိုးကိရိယာ. S80 စီးရီးများ၏ကျောဘက်တွင် 850 ℃နှင့် 2000V စမ်းသပ်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့် PC ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, သင်နှင့်သင့်မိသားစုဘေးကင်းရေးကိုအာမခံရန်. ထုတ်ကုန်၏ 20A Double Pole …
1 Way Wall Switch နှင့် 1 Screwless Terminal ဖြင့် Way Push Button
[template id ="3645"] အသေးစိတ်ကနေရန်2ဂိုဏ်း2Way ကိုအလင်း Switch အားလုံးခြုံငုံဒီဇိုင်း, S80 စီးရီး၌တည်၏,နေရာတိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သဘောထားကိုထင်ဟပ်နိုင်သည်. ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးကိုအမြဲ ဦး စားပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားကျေနပ်စေမည့်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်တောင်းဆိုသည်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုရွေးချယ်ပါ, ငါတို့နှင့်အတူပူးပေါင်းရန်ရွေးချယ်ပါ, သင် ... ဖြစ်လိမ့်မည်…
2 Way Wall Switch နှင့်2Screwless Terminal ဖြင့် Way Push Button
[template id ="3642"] ၏ဒီဇိုင်း2Way Switch Plus2Way Push Button သည်ရိုးရှင်းပြီးကြော့ရှင်းပါသည်, ပလပ်စတစ်ဘောင်သည်လုံလောက်သောစွမ်းအားကိုပေးနိုင်သည်, နှင့်အဖုံးရေစိုခံပစ္စည်းကိုရွေးချယ်နိုင်သည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ဥရောပစံထုတ်ကုန်များကိုစတင်တီထွင်ခဲ့သည် 2012, နှင့် S80 စီးရီးတစ်ခုဖြစ်သည် ...
[template id ="3639"] ကုန်ပစ္စည်းကိုတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီးအမျိုးမျိုးသောအလှဆင်မှုများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုပြင်နိုင်သည်. ၏ဒီဇိုင်း3ဂိုဏ်း 1 Light Switch သည် People's Daily Life အတွက်အဆင်ပြေစေပြီးဥရောပဈေးကွက်တွင်လူကြိုက်များသည်. ၏ကုန်ပစ္စည်းအားသာချက်များ3ဂိုဏ်း 1 Way Light …
1 ဂိုဏ်း 1 အညွှန်း - အမြန်ဝါယာကြိုးနှင့်အတူ Way Light Switch
[template id ="3638"] ၏ကုန်ပစ္စည်းအားသာချက်များ 1 ဂိုဏ်း 1 Indicator Screwless Terminal နှင့်အသုံးပြုထားသော Way Light Switch 1. ထုတ်ကုန်သည်ဝါယာကြိုးအလွယ်တကူတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်. 2.Luminous အရိပ်အယောင်, မှောင်မိုက်တဲ့ညမှာ switch ရဲ့အနေအထားကိုလွယ်လွယ်ကူကူရှာဖွေနိုင်ပါတယ်, ယူနီဖောင်းမျက်နှာပြင်တောက်ပ, ချောချောမွေ့မွေ့ခံစားမှု, အကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှုခံစားမှု…
Audio Power Socket ကိုနှစ်ချက်တပ်နိုင်သည်
[template id ="3634"] Double Audio Power Socket 1.E ၏ထုတ်ကုန်အားသာချက်များရှိသည် 35 ခလုတ်များနှင့် sockets အောင်နှစ်ပေါင်းအတွေ့အကြုံကို. 2.Double Audio Power Sockethas သည်လျှောက်လွှာအခြေအနေများကြွယ်ဝသည်, အရာအိမ်အလှဆင်သက်ဆိုင်ပါသည်, ပြပွဲ, ဟိုတယ်, စသည်တို့. 3.ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေရန်မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသောပစ္စည်းများပြုလုပ်ရန်ခလုတ်များနှင့်နောက်ကျောတွင်ထားရှိသောပစ္စည်းများ…
လူပျို LAN ပါဝါထွက်ပေါက် (CAT5E / CAT6 STP / UTP)
[template id ="3633"] Single LAN Power Outlet ၏ကုန်ပစ္စည်းအားသာချက်များ (CAT5E / CAT6 STP / UTP) 1.ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းသည်ရိုးရှင်းပြီးဂန္ထဝင်ဖြစ်သည်, အလှဆင်ထားသောပုံစံအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်လျော်သည်. 3.LAN socket model ၏ဒီဇိုင်းသည်အထူးကောင်းမွန်ပြီးသံချေးတက်ခြင်းကိုကာကွယ်သည်။ …
နှစ်ဆ TEL ပါဝါထွက်ပေါက် CAT3
[template id ="3632"] Double TEL Power Outlet CAT3 1. ကုန်ပစ္စည်းအားသာချက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည်areaရိယာကိုလွှမ်းခြုံထားသည် 300,000 စတုရန်းမီတာနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုအာမခံဖို့ရာပေါင်းများစွာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများရှိပါတယ်. 2.ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့်လုံး ၀ လိုက်နာမှုရှိသည်. 3.နှစ် ဦး တယ်လီဖုန်းပါဝါထွက်ပေါက် ROHS လွန်ပြီ,လက်လှမ်းမီနှင့် ...
RCA ပါဝါ Socket
[template id ="3631"] ကုန်ပစ္စည်းအားသာချက်များ RCA Power Socket 1. ထုတ်ကုန်၏ဒီဇိုင်းသည်ရိုးရှင်းပြီးဂန္တဝင်ဖြစ်သည်, အလှဆင်ထားသောပုံစံအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်လျော်သည်။ ၂။ ထုတ်ကုန်သည်အားကောင်းသောဆန့်ကျင်သောအချက်ပြနိုင်စွမ်းရှိပြီးအသုံးပြုရန်ပိုမိုအဆင်ပြေသည်။
[template id ="3631"] Single TV Power Outlet ၏ Surge Protection နှင့်ထုတ်လုပ်မှုအားသာချက်များ ၁ ။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည်anရိယာတစ်ခုအကျုံးဝင်သည် 300,000 စတုရန်းမီတာနှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုအာမခံရန်ရာပေါင်းများစွာသောထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများရှိသည်။ ၂။ ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုသည်အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့်လုံး ၀ လိုက်နာသည်။
တီဗီ + FM ရေအားလျှပ်စစ်ပါသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်
[template id ="3629"] S80 စီးရီးတွင် Surge Protectiont နှင့်အတူ TV + FM Power Outlet သည်ဥရောပဈေးကွက်သို့ရောင်းချသည့်အခြေခံအကျဆုံးနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။. ၎င်း၏အသွင်အပြင်ရိုးရှင်းပြီးလက်ရာမြောက်သောဖြစ်ပါတယ်, မိသားစုနှင့်ဟိုတယ်အလှဆင်ပစ္စည်းများအတွက်အလွန်သင့်တော်သည်, ထို့အပြင်ဖက်ရှင်နှင့်ခေတ်မီ၏အပြည့်အဝ. TV + FM Power ၏ထုတ်ကုန်အားသာချက်များ…
[template id ="3650"] 16A Smart Thermostat Switch ၏ထုတ်ကုန်နိဒါန်းဤထုတ်ကုန်သည်အဆင့်မြင့်ဆုံး microcomputer chip ကိုအသုံးပြုသည်. ဤအပူထိန်းကိရိယာသည်အတွင်းနှင့်အပြင်အာရုံခံကိရိယာမှအပူချိန်ကိုတိကျမှန်ကန်စွာသိရှိနိုင်သည်, နှင့်အသုံးပြုသူကသတ်မှတ်ထားသည့်အပူချိန်နှင့်အတူစစ်မှန်သောအချိန်အတွက်နှိုင်းယှဉ်, အသုံးပြုသူရဲ့လိုအပ်ချက်အတွက်အလိုအလျောက်အပူပေးစက်ကိုဖွင့် / ပိတ်ရန်. ဘယ်အချိန်မှာလဲ
တီဗွီ + FM + SAT ပါဝါထွက်ပေါက်၊
[template id ="3645"] ထုတ်ကုန်၏အားသာချက်များ TV + FM + SAT Power Outlet မှ Surge protection ဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ ထုတ်ကုန်သည် TV plug module တစ်ခုဖြစ်သည်, FM plug, ဝယ်သူများ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန် SAT plug. 2.သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သောသန့်ရှင်းသောရှုထောင့်တစ်မျိုးပါ ၀ င်သည့်အတောင့်မဲ့ပြားပြားဒီဇိုင်းသည်သန့်ရှင်းရေးအတွက်လွယ်ကူသည်. 3.ထုတ်ကုန် TUV ရရှိခဲ့သည်, CE နှင့် RoHS …
123နောက်>...18 စာမျက်နှာ 1 ၏ 18